Teny tsara indrindra avy amin'i Angela Merkel - Victor Mochere
Fotoana famakiana: 10 mn novakiana
Angela Dorothea Merkel dia mpanao politika sy mpahay siansa alemà izay niasa ho Chancellor of Germany nanomboka tamin'ny 2005 ka hatramin'ny 2021. Izy no lehiben'ny mpanohitra tamin'ny 2002 ka hatramin'ny 2005 ary mpitarika ny Christian Democratic Union (CDU) nanomboka tamin'ny 2000 ka hatramin'ny 2018. Merkel no vehivavy voalohany voafidy ho Chancellor, ary Chancellor voalohany hatramin'ny nivondronana indray izay nobeazina tany Alemaina Atsinanana teo aloha. Nandritra ny fotoana naha Chancellor azy, i Merkel dia nantsoina matetika ho mpitarika ny Vondrona Eoropeana (EU) ary vehivavy matanjaka indrindra eran-tany.
Niditra tao amin'ny politika i Merkel taorian'ny Revolisiona tamin'ny 1989, izay mpitondra tenin'ny lefitry ny governemanta voalohany voafidy tamin'ny fomba demokratika tany Alemaina Atsinanana notarihan'i Lothar de Maizière. Taorian'ny fampivondronana Alemana tamin'ny 1990, i Merkel dia voafidy ho ao amin'ny Bundestag ho an'ny fanjakan'i Mecklenburg-Vorpommern. Amin'ny maha-protégée an'ny Chancellor Helmut Kohl, i Merkel dia voatendry ho Minisitry ny Vehivavy sy ny Tanora tamin'ny 1991, ary lasa Minisitry ny Tontolo Iainana, Fiarovana ny Zavaboary ary Fiarovana Nokleary tamin'ny 1994.
Taorian'ny nandresen'ny CDU tamin'ny fifidianana federaly tamin'ny 1998, dia voafidy ho Sekretera Jeneralin'ny CDU i Merkel, talohan'ny nahatongavany ho mpitarika vehivavy voalohany tao amin'ny antoko ary vehivavy voalohany mpitarika ny mpanohitra roa taona taty aoriana, taorian'ny tantara ratsy momba ny fanomezana izay nanongana an'i Wolfgang Schäuble. Taorian'ny fifidianana federaly tamin'ny 2005, i Merkel dia voatendry handimby an'i Gerhard Schröder ho Chancellor any Alemaina, nitarika fiaraha-mitantana lehibe ahitana ny CDU, ny antoko rahavaviny Bavarian ny Christian Social Union (CSU) ary ny Social Democratic Party of Germany (SPD).
Ao amin'ny politika ivelany, i Merkel dia nanantitrantitra ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena, na eo amin'ny sehatry ny EU sy ny OTAN, ary ny fanamafisana ny fifandraisana ara-toekarena transatlantika. Tamin'ny 2008, i Merkel dia filohan'ny Filankevitra Eoropeana ary nandray anjara lehibe tamin'ny fifampiraharahana momba ny Fifanarahana ao Lisbonne sy ny Fanambarana Berlin. Nitana andraikitra lehibe i Merkel tamin'ny fitantanana ny krizy ara-bola eran-tany tamin'ny taona 2007-2008 sy ny krizin'ny trosa Eoropeana.
Nifampiraharaha tamin'ny drafi-panentanana ny Vondrona Eoropeana tamin'ny 2008 izy izay mifantoka amin'ny fandaniana fotodrafitrasa sy ny fampiasam-bolam-panjakana mba hanoherana ny Fihemorana lehibe. Ao amin'ny politika ao an-toerana, ny programa Energiewende an'i Merkel dia nifantoka tamin'ny fampivoarana angovo ho avy, mikatsaka ny hanafoanana ny angovo nokleary any Alemaina, hampihenana ny entona entona mandatsa-dranomaso ary hampitombo ny angovo azo havaozina.
Ny fanavaozana ny Bundeswehr izay nanafoana ny fisoratana anarana, fanavaozana ny fikarakarana ara-pahasalamana, ary ny valintenin'ny governemantany tamin'ny krizy mpifindra monina Eoropeana tamin'ny taona 2010 sy ny valan'aretina COVID-19 tany Alemaina dia olana lehibe nandritra ny fitondrana azy. Izy no mpitarika ambony G7 nanomboka tamin'ny 2011 ka hatramin'ny 2012 ary nanomboka tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2021. Tamin'ny 2014 izy no lasa lehiben'ny governemanta naharitra ela indrindra tao amin'ny EU. Tamin'ny Oktobra 2018, nanambara i Merkel fa hiala amin'ny maha-mpitarika ny CDU azy amin'ny fivoriamben'ny antoko, ary tsy hitady fe-potoana fahadimy ho Chancellor amin'ny fifidianana federaly 2021.
Ny sasany amin'ireo teny tsara indrindra avy amin'i Angela Merkel dia voatanisa etsy ambany.
"Ny marimaritra iraisana tsara dia izay ahafahan'ny tsirairay mandray anjara." - Angela Merkel
"Aoka ho mihoatra noho izay miseho ianao ary aza miseho ho mihoatra noho ianao." - Angela Merkel
“Ny zavatra rehetra toa apetraka ao anaty vato na tsy azo ovana dia mety hiova tokoa. Amin’ny raharaha lehibe na kely, dia marina fa ny fiovana rehetra dia manomboka ao an-tsaina.” - Angela Merkel
“Raha ny momba ny fetra ambony [amin'ny mpitsoa-ponenana], dia mazava ny hevitro fa tsy hanaiky izany aho.” - Angela Merkel
“Amin'ny maha-filohan'ny governemanta ahy, andraikitro ny manao mazava kokoa ny tanjona ara-politika sy ny fifandraisana. Anisan'ny antony tsy nahatakaran'ny besinimaro ny sasany tamin'ireo fanavaozana natao nandritra ny vanim-potoanan'ny mpanao lalàna teo aloha dia ny resaka be loatra momba ny antsipiriany, fa ny sary ankapobeny matetika dia tsy hita maso.” - Angela Merkel
“Tamin'ny fampiraisana Alemana, dia tsara vintana izahay nahazo fanampiana betsaka avy any Alemaina Andrefana. Ankehitriny, manana vintana tsara izahay afaka mifanampy any Eoropa. ” - Angela Merkel
“Tsy mahalala sisintany ny fiovaovan'ny toetr'andro. Tsy hijanona izany alohan’ny tsy maintsy hitondran’ireo nosy Pasifika sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena rehetra eto amin’ny andraikitry ny fampandrosoana maharitra”. - Angela Merkel
"Tsy mora ny fifampiraharahana momba ny toetr'andro amin'ny filoham-pirenena amerikana ... taloha." - Angela Merkel
“Aza adino fa ny fahafahana dia tsy zavatra azo raisina ho tsinontsinona velively.” - Angela Merkel
"Ny olona rehetra izay tonga dia olombelona ary manan-jo horaisina tahaka izany." - Angela Merkel
“Tsy mbola mpanolo-tsaina tsara ny tahotra, na teo amin’ny fiainantsika manokana na teo amin’ny fiaraha-monina misy antsika. Ny kolontsaina sy ny fiaraha-monina voavolavolan’ny tahotra dia tsy isalasalana fa tsy hahafehy ny ho avy.” - Angela Merkel
"Amiko dia zava-dehibe foana ny handaloko ny safidy rehetra azo atao amin'ny fanapahan-kevitra." - Angela Merkel
"Ho ahy manokana, ny fanambadiana dia lehilahy sy vehivavy miara-mipetraka." - Angela Merkel
"Ny fahafahana dia tsy midika hoe afaka amin'ny zavatra iray, fa fahafahana manao zavatra." - Angela Merkel
"Nanjary firenena i Alemaina izay ampifandraisin'ny olona any ivelany amin'ny fanantenana." - Angela Merkel
“Mijoro amin'ny ady amin'ny fampihorohoroana eo anilan'i Frantsa i Alemaina, tafaray amin'ny maro hafa. Resy lahatra aho fa na dia eo aza ny zava-tsarotra rehetra, dia handresy amin'ity ady ity isika. " - Angela Merkel
"Tsy manana toerana eto amin'ity firenena ity ny fankahalana, ny fanavakavaham-bolon-koditra ary ny extremisme." - Angela Merkel
"Tsy manam-pahaizana amin'ity sehatra ity aho fa miezaka ny manaraka ny Bundesliga. Ary manaraka akaiky kokoa ny fiadiana ny amboara eran-tany sy ny fiadiana ny ho tompondaka eropeana aho.” - Angela Merkel
"Heverina ho toy ny fanemorana maharitra aho indraindray, saingy heveriko fa ilaina sy tena zava-dehibe ny mitondra olona sy mihaino azy ireo amin'ny resaka politika." - Angela Merkel
"Mino aho fa ireo izay mamokatra entona kely indrindra amin'ny fiara dia ireo izay manana fahombiazana lehibe indrindra eran-tany." - Angela Merkel
“Nisafidy ny hanohy ny asa momba ny fizika aho satria tsy mora miondrika ny fahamarinana.” - Angela Merkel
“Nanontany be dia be taminareo aho satria nanontany antsika ny fotoana - fantatro tsara izany. Ary tsy afaka mampanantena anao aho fa hihena ny fitakiana amin’ny hoavy, satria tsy maintsy manao izay takian’ny fotoana isika.” - Angela Merkel
"Mety hiondrika aho, saingy tsy ho tapaka mihitsy aho satria izany no toetrako amin'ny maha-vehivavy matanjaka ahy." - Angela Merkel
“Tsy nanambany ny tenako mihitsy aho. Ary tsy nahita zavatra ratsy mihitsy aho tamin'ny ambiansy." - Angela Merkel
"Izaho manokana dia manantena ary maniry ny hijanonan'i Grande-Bretagne ho ampahany amin'ny Vondrona Eoropeana." - Angela Merkel
“Raiko ny anjara andraikitro amin’ny maha-filohan’ny antoko sy Chancellor ahy.” - Angela Merkel
"Tiako ny hahavitan'ny toekarentsika Alemanina matanjaka hiatrika ny fampivondronana ny toekarena tena izy sy ny toekarena nomerika, raha tsy izany dia ho resy amin'ny fifaninanana isika." - Angela Merkel
“Tiako ny ho firenena azo antoka, manankarena, mandefitra – andriambavy ho an'ny talenta iraisam-pirenena ary fonenan'ireo mpisava lalana sy mpanavao izay hamolavola izao tontolo izao ho avy.” - Angela Merkel
“Tsy avelako hisy hilaza amiko fa tsy maintsy mandany vola bebe kokoa isika. Tsy noho ny vola kely loatra no nitrangan’ity krizy ity fa noho ny fampitomboana ny toekarena tamin’ny vola be loatra ary tsy fitomboana maharitra izany”. - Angela Merkel
“Raha tsy mahomby amin'ny resaka mpitsoa-ponenana i Eoropa, dia tsy ho Eoropeana iriantsika izany. Raha tsy maintsy manomboka miala tsiny isika izao noho ny fanehoana endrika sariaka ho valin'ny toe-javatra maika, dia tsy fireneko izany. Hiatrika izany izahay.” - Angela Merkel
"Raha mijery ny fifandraisan'ny Firaisana Sovietika sy Alemana isika tamin'ny 1945 ary ny toerana misy antsika ankehitriny, dia nahavita zavatra betsaka izahay." - Angela Merkel
“Raha ankafizinao ireo teny nindramina ireo dia ho tianao ny fanangonana ireo teny nalaina momba ny fiovan'ny toetr'andro mba hanentanana anao handray andraikitra.” - Angela Merkel
“Tany Alemaina Atsinanana, dia nihazakazaka hatrany amin’ny sisin-tany izahay vao afaka nahita ny sisin-taninay manokana.” - Angela Merkel
"Mba hitazonana an'i Eoropa amin'ny fotoana maharitra, fa ambonin'izany rehetra izany mba hanamafisana an'i Eoropa amin'ny fotoana maharitra, dia tsy maintsy mitahiry sy miaro ny zava-bitan'ny fampidirana Eoropeana isika." - Angela Merkel
"Raha resaka votoaty sy fandaminana dia tena vonona izahay." - Angela Merkel
"Mila asa i India, mila olona i Alemaina, ary zava-dehibe ny fiaraha-miasa mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny demografika amin'ny firenena roa tonta." - Angela Merkel
“Tsara kokoa ny mifampiresaka toy izay ny mifampiresaka.” - Angela Merkel
"Adidiko sy adidiko ny manao izay rehetra azo atao mba hahitan'i Eoropa lalana iraisana." - Angela Merkel
“Tsy momba ny teny lehibe amin'ny fanambarana toy izany fotsiny izany, fa momba ny hoe afaka miteny ianao rehefa afaka iray, roa, telo na dimy taona: Nahavita izay nosoratanay izahay. - Angela Merkel
“Andao ho liana bebe kokoa momba ny zava-mitranga any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, miroso amin'ny fijerena ny foitra kely… Tsy maintsy lazaiko fa tena faly aho ary somary mirehareha amin'ny maha anisan'ny Vondrona Eoropeana.” - Angela Merkel
"Ny famelana ny taloha dia ampahany amin'ny fiandohana vaovao." - Angela Merkel
“Angamba lasa nihamafy kokoa aho. Ny fisehosehoana amin'ny toe-javatra faran'izay betsaka dia manamafy orina ny olona iray. Mila mamolavola paikady ho velona ianao. ” - Angela Merkel
“Tsy nisy nahalala hoe ahoana no hiafaran’ny Ady Mangatsiaka tamin’izany, fa nifarana izany. Izany dia ao anatin'ny traikefa niainantsika… Gaga aho amin'ny fahasahirananay indraindray, ary ny haingana very herim-po.” - Angela Merkel
“Tsy misy olona any Eoropa hafoy. Tsy misy na iza na iza any Eoropa ho voahilika. Tsy hahomby ihany i Eoropa raha miara-miasa isika.” - Angela Merkel
“Tsy misy azo raisina ho tsinontsinona. Azo atao ny zava-drehetra.” - Angela Merkel
“Mazava ho azy fa holazaiko avy eo fa mino aho fa ny fiovan'ny toetr'andro dia avy amin'ny olona tanteraka. Te hahita ny fivoaran'ny toerana izahay. " - Angela Merkel
"Tsy maintsy manolo-tena amin'ny olona amin'ny fepetra mitovy ny mpanao politika." - Angela Merkel
"Tsarovy fa ny fisokafana dia misy risika foana." - Angela Merkel
“Noho izany, tsy maintsy miezaka mitady marimaritra iraisana amin'ny fifanajana, nefa koa amin'ny hevitra mazava. Politika izany – mitady hatrany ny lalana iraisan'ny fandrosoana.” - Angela Merkel
"Ny firaisankina sy ny fifaninanana dia lafiny roa amin'ny vola madinika Eoropeana." - Angela Merkel
"Mahagaga ny tenanao amin'izay azo atao." - Angela Merkel
“Tena sarotra ny resaka manontolo momba ny toetrandro, raha tsy hoe tena tsy afa-po. Tsy misy famantarana raha hijanona ao amin'ny Fifanarahana Paris i Etazonia na tsia. " - Angela Merkel
"Ny euro no anjarantsika iraisana, ary i Eropa no hoavintsika." - Angela Merkel
"Ny fanontaniana dia tsy hoe afaka miova ve isika fa hoe miova haingana ve isika." - Angela Merkel
“Ny valin-kafatra mahery indrindra amin'ny mpampihorohoro dia ny manohy ny fiainantsika sy ny soatoavintsika araka izay ananantsika hatramin'izao – matoky tena sy malalaka, mandinika ary mirotsaka. Isika Eoropeana dia hampiseho ny fiainantsika malalaka fa mahery noho ny fampihorohoroana rehetra. - Angela Merkel
"Tena avo ny fahavononana hianatra fahaiza-manao vaovao." - Angela Merkel
“Misy tsipika mena iray tsy tokony hiampitantsika. Fanoloran-tena ho an’ny zon’olombelona, ​​fanajana ny hasin’ny maha-olombelona. Tsy tokony hisy marimaritra iraisana.” - Angela Merkel
"Firenena mifototra amin'ny demokrasia, ny fandeferana ary ny fisokafana amin'izao tontolo izao isika." - Angela Merkel
“Mifampitondra andraikitra isika. Miezaka mandresy lahatra ireo misalasala aho. Mbola misy asa tsy maintsy atao.” - Angela Merkel
“Tsy mila mitokana izahay. Tianay ny varotra misokatra sy ny ady amin'ny fiarovana. Olana henjana izany ao anatin'ny fifampiraharahana G20, fa rehefa miasa amin'ny antontan-taratasy ara-politika dia mazava ho azy fa fanohanana lehibe ho antsika izany raha nanohana azy ny toekarena any amin'ny firenena G20 rehetra. " - Angela Merkel
“Tsy tianay hiverina ny famantaranandro ny alahady; tianay hapetraka aloha ny famantaranandro.” - Angela Merkel
"Manantena izahay fa hifikitra amin'ny lalànay ny olona manatona anay." - Angela Merkel
“Kely loatra ny zavatra nataonay taloha, ka izany no nahatonga anay nampiditra mpitsoa-ponenana – satria izany no tokony hatao.” - Angela Merkel
“Manana adidy amin'ny maha-panjakana antsika ny miaro ny toekarentsika… Miaro ny haren-tsaina isika.” - Angela Merkel
“Nijoro tamin'ny soatoavinay izahay; ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, ny fahalalahan’ny demokrasia, ny fahalalahan’ny fivavahana ary ny fahalalahana maneho hevitra.” - Angela Merkel
"Tsy maintsy manana herim-po isika hanaiky fa ny firenena sasany dia afaka mandroso haingana kokoa noho ny hafa." - Angela Merkel
“Mila faravodilanitra maharitra sy orinasa mampiasa vola amin'ny ho avy isika. Zava-dehibe ny fiomanana amin'ny tsenan'ny herinaratra haingana araka izay azo atao. Tokony ho lesona ho an'ny politikan'ny teknolojia izany. Tsy te hiaina izany indray izahay. Raha mandray anjara amin'ny fikarohana sy ny prototypes isika, dia misy vintana tsara kokoa hitondrana ny famokarana sela ho an'ny taranaka manaraka any Eoropa na any Alemaina. - Angela Merkel
"Tianay ny hijanona ho vatofantsika miorina any Eropa." - Angela Merkel
“Tsy maintsy manaiky ny fifindra-monina ara-dalàna isika; izany no fanatontoloana… Amin'ny vanim-potoanan'ny finday, tsy afaka manidy ny tenantsika isika… fantatry ny olona tsara ny fomba fiainantsika any Eoropa.” - Angela Merkel
“Hafa ihany ny olona. Sarotra indraindray ny mitady marimaritra iraisana, fa izay no nahavoafidy antsika. Raha toa ka tsy nisy olana ny zava-drehetra dia tsy mila mpanao politika hanao ireo asa ireo. Tena faly aho manamarika fa toa niova kely ihany koa ny fomba fijery momba izany, farafaharatsiny tany Alemaina. ” - Angela Merkel
"Na iza na iza manapa-kevitra ny hanokana ny fiainany amin'ny politika dia mahafantatra fa tsy ny fitadiavana vola no laharam-pahamehana." - Angela Merkel
"Na iza na iza manapa-kevitra ny handao an'io fianakaviana io dia tsy afaka manantena ny hanaisotra ny adidy rehetra raha mitazona ny tombontsoany." - Angela Merkel
“Ho afaka hiara-miasa tsara ve isika sa hiverina amin'ny anjara andraikitsika tsirairay avy? Miantso antsika aho, ary manantena aho fa hahita toerana iraisana momba izany isika, andao hiara-hanatsara izao tontolo izao ary hihatsara ny zava-drehetra ho antsika tsirairay avy. - Angela Merkel
“Eny, fantatry ny zazavavy kely any Alemaina izao fa mety ho lasa mpanao volo, na Chancellor. Andao hojerena." - Angela Merkel
“Azo lazainao tokoa fa tsy nanambany ny tenako mihitsy aho, tsy misy maharatsy ny fieritreretana. - Angela Merkel
Stephen Schwarzman Harena Net 2022
Ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny orinasa madinika any Kenya